Galmee kee keessa bakka kasaa itti saaguu barbaaddu cuqaasi.
faayilii walta'iinsaa fayyadamuu yoo barbadde, faayilii walta'iinsaa naannoo Dirqalaalee keessaa fili, qabdoo faayilii cuqaasi, sana booda faayilii jireessa kaa'i ykn faayilii walta'iinsaa haaraa uumi.
Kasaaf dirqalaalee dhangeessuu qindeessi, caancala ammaa irratti, ykn caancala qaaqa kana kamiyyuu irratti. Fakkeenyaf, yoo mataduree qubee qeentee kasaa kee keessssatti fayyadamuu barbaadde, caancala Galchiiwwanii cuqaasi, sana booda Daangessaa Tartiiba Qubeen fili. Kasaa keessaa sadarkaawwan dhangessuu jijjiiruuf, caancala Akkaataalee cuqaasi.
Kasaa haaromsuuf, kasaa keessatti mirga cuqaasi, sana booda Kasaa/Gabatee haaromsi fili.
faayilii Walta'iinsa Uumuu
Title is: Kasaawwan Tartiiba qubeen Uumuu